R/W Somalia oo si rasmi ah magaalada Dhuusamareeb uga furay shir weynaha dib u heshiisiinta… – Hagaag.com
R/W Somalia oo si rasmi ah magaalada Dhuusamareeb uga furay shir weynaha dib u heshiisiinta…
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magaalada Dhuusamareeb si rasmi ah uga furay shir-weynaha dib-u-heshiisiinta Galmudug oo ay ka qayb gelayaan ergo meteleysa dhammaan reer Galmudug.
Ra’iisul Wasaaraha oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga qaban-qaabada shir-weynaha uga mahad celiyay dadaalkii dheeraa ee ay u galeen isu keenidda bulshada Galmudug, ayaa sheegay in shirkaani uu gogol xaar u yahay dhismaha Galmudug loo dhanyahay oo ka shaqeysa danaha reer Galmudug kana qayb qaadata horumarka guud ahaan dalka.
Kheyre ayaa sidoo kale u mahad celiyay Madaxweynaha Galmudug, Ahlu Sunna, dhammaan bulshada reer Galmudug, ciidamada amniga sugaya iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in geeddi socodka dhismaha Galmdug dhammeys ah lasoo gaarsiiyo heerka uu maanta marayo, waxa uuna shirka u rajeeyay in uu guul ku dhammaado.
“Shirkaan aan daah fureyno waa albaabkii laga gelaayay dowladnimada Galmudug, Si loo heshiiyo oo maamul la wada leeyahay loo dhiso waa in danta gaarka ah meel la dhigo oo tan guud laga shaqeeyo….Waa in aan ka guurno fikirka khilaafka ku dhisan, dhaqanka colaadda ku dhisan iyo maslaxadda qabyaaladda ku dhisan”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa bishii June ee sannadkan waxa uu deegaannada Galmudug ka bilaabay dadaal gundhiggiisu ahaa ka guul gaaridda geeddi sococdka qorshaha reer Galmudug ay ku dhisanayaan dowlad gobaleed dhammeys ah oo loo simanyahay, waxaana dadaalladaas soo dhaweeyeeyay beesha Caalamka, reer Galmudug iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhan.